Vakadzingwa muZanu PF, VaDaniel Shumba, Vanoparura Bato Ravo Idzva
Vaimbomirira Masvingo Urban muNational Assembly, avo vakadzingwa mubato reZanu PF, zvichitevera kubviswa kwaVaRobert Mugabe pachigaro chemutungamiri wenyika gore rapera, VaDaniel Shumba, vaparura neMugovera bato ravo reUinted Democractic Alliance, UDA, kuChitungwiza.
VaShumba, avo vaifungidzirwa kuti vaitsigira chikwata chebato iri cheGeneration 40 icho chaive nemudzimai waVaMugabe, Amai Grace Mugabe, vevamwe vakaita saVaJonathan Moyo naVaSaviour Kasukuwere, vaudza Studio7 bato ravo reUDA rakavambwa muna Zvita gore rapfuura.
Vati bato ravo rinoziva zvinoda kuitwa kuti nyika ino ive nehutongo wejekerere.
Vati bato ravo rave mumatunhu ese munyika uye nhengo dzaro dzakabva kumapato akawanda akaita seZanu PF, MDC, NPP nemamwe.
VaShumba, avo vaimbove musoja, vati havana kufara nekubvuta masimba kwakaita nemauto achishandiswa nevanhu vane huwori munyika.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa mubato iri, VaEdward Kakora, vekuMashonaland Central, vaudza Studio7 kuti kubviswa kwaVaMugabe kwakatsamwisa vatsigiri vakawanda veZanu PF muMashonaland Central.
VaShumba avo vakambodzingwa muZanu PF zvakare vakatanga bato rave reUnited Peoples Party muna 2006 vasati vadzokerazve muZanu PF muna2008 vati UPP yakafa kare.
Vati UDA ichakwikwidza zvigaro zvese muparamende, makanzuru nechemutungamiriri wenyika.
Mudzidzisi wepaGreat Zimbabwe University, VaJoel Mukusha, vati zviri kuitwa naVaShumba nevamwe vavo hazvikanganisi bato riri kutonga reZanu PF.
Vati Zanu PF yakadzinga vanhu ava mushure mekuona kuti vanhu vaida kushandisa musangano kuwana mari chete asi vasina zvido zvemusangano.
Mupepeti webepanha reThe Obeserveruye vari nhengo yeNational Editors Forum, VaBarnabas Tondhlana, vaudza Studio7 kuti mapato angawande muZimbabwe asi mapato anotsigirwa zvakanyaya iZanu PF neMDC-T yaVaNelson Chamisa.
Zvinonzi kuwanda kwemapato ari kuda kupinda musarudzo kwave kutemesa musoro Zimbabwe Electoral Commission sezvo pave nemapato anodarika zana nemakumi maviri.